Ilanga Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Uhlala kwindawo efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo.
Intsingiselo yekhadi «Ilanga»
Ikhadi leLanga limalunga nesiqu sakho - ungubani kwaye uhlakulela njani ubuntu bakho kunye nomlinganiswa wakho. Ilitha leLanga kulapho ubume boqobo bomntu bunokufunyanwa khona kwezempilo nakukhuseleko.. Ukusikelwa umda kwexesha nendawo kuyasuswa; umphefumlo uhlaziyekile kwaye ukhuselekile okwethutyana kwisiphithiphithi ngaphandle kweendonga zegadi. Ngaphantsi kokukhanya kwelanga, ubomi buphinda ubuhle bayo bokuqala, inyaniso kunye nobuhle. Ukuba umntu ubonakalisiwe kweli khadi, ihlala ibonisa umntu onguthixo.
Xa kuboniswa abantu ababini, umfanekiso ubonakalisa isisombululo sempixano phakathi kwezichasi kuwo onke amanqanaba. Ingathi eli khadi lithi: "Awunakwenza nto gwenxa, konke kokona kulungileyo".
Malukhanye ukhanyiselo lwakho. Thembela kumandla angcwele endalo yakho yoqobo.
Ikhadi iLanga ikucebisa ukuba ubuthembe ubuThixo bakho bendalo. Lahla nayiphi na imeko yenkcubeko ekuthintela ekunyanisekeni kuwe. Ngena ekukhanyeni okupheleleyo kwenyaniso kwaye utyhile iinjongo kunye nemigaqo yakho. Nje ukuba kwenziwe oku, awuzukuphinda uxhobise abantu abakugxekayo nabakuphoxa. Gxila kokuqinisekileyo nakwinyani. Ukuzithemba kwakho okuqaqambileyo kunokuba kukukhanya kwabanye ukuba uyivelisa ngaphandle kobugcisa.